Vaovao - Tombony ho an'ny laryngoscope video
Raha ampitahaina amin'ny laryngoscope nentim-paharazana, ny laryngoscope horonantsary dia afaka manao mazava kokoa ny fahitana ankolaka rehefa nampidirina tao amin'ny làlambe ambony. Ireo fitaovana fitsaboana vaovao miaraka amin'ny fakantsary sy fitaovana fandraisam-peo dia tena manampy amin'ny fandidiana fanampiana. Amin'ny alàlan'ny fiheverana bebe kokoa amin'ny fifantenana ihany no ahafahantsika mahazo ny fankasitrahan'ny mpanjifa bebe kokoa. Noho izany dia mbola mila manao safidy tsara kokoa isika.
Amin'ny maha karazana fitaovana fampidirana tracheal vaovao azy, ny laryngoscope video dia marimarina kokoa rehefa mitifitra sary mavitrika ao amin'ny larynx, mba hahitana fiasa tsara amin'ny kalitao. Misafidiana mivantana avy amin'ny fantsona matihanina, ho be fiheverana kokoa ny serivisy, ary ho tsara tokoa ny tombony azo. Ka mbola mila misafidy iray tsara kokoa isika.
Amin'ny fitsaboana ireo marary mila fandidiana sy famerana ny taovam-pisefoana, ny fampiasana an'io laryngoscope io dia afaka manome fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa amin'ny dokotera, izay manampy betsaka amin'ny famolavolana drafi-pitsaboana. Mba hahazoana antoka bebe kokoa ny serivisy dia tsy maintsy mandinika azy bebe kokoa isika. Azo antoka fa io no lakilen'ny kalitao tsara kokoa. Noho izany, ny safidy tsara kokoa dia tena handray soa lehibe.
Mifanohitra amin'izany, ny laryngoscope amin'ny kalitao avo lenta dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny fitsaboana ary afaka manome fanampiana amin'ny fitsaboana. Mba hanampiana ny asa fampidirana tracheal, miaraka amin'ny alàlan'ity fitaovana ity dia azo hatsaraina ny tahan'ny fahombiazan'ny fidiran-drivotra, ka tsara kokoa ny miatrika azy io, ary hanana fahombiazana tsara.
Fotoana fandefasana: 09-10-21